Js / npm / umqambi ngaphandle kwengcambu > UVielhuber uDavid
Js / npm / umqambi ngaphandle kwengcambu08
Kwiposti yebhlog endala Ndichaze indlela yokubamba iNode.js simahla usebenzisa uHeroku . Ngoku ndiza kukubonisa indlela onokufaka ngayo i-Node.js , npm kunye noMqambi nakweyiphi na enye indawo ekwabelwana ngayo ngaphandle kwamalungelo engcambu ngemigca embalwa yekhowudi. Ngayo unokufaka iiphakeji, usebenzise usetyenziso lweVue.js okanye qala nje iseva ye-Express.js. Sisoloko sisebenza kwisikhombisi somsebenzisi kwaye sisebenzisa i- nvm -iNode Package Manager.
Kubalulekile ukuqinisekisa kwangaphambili ukuba umqambi kunye node azifumaneki kwaye le migca ilandelayo ayivelisi mveliso:
Kuqala sibeka imeko-bume yokwexeshana esiya kuyidinga kamva. Ukwenza oku, simisela isikhombisi somsebenzisi (ngesiqhelo ~ /, kweminye imikhosi ekwabelwana ngayo nayo / www / htdocs / xxxxxxx /) kunye nohlobo lwe-PHP olufunwayo (umzekelo ngomboneleli we-All-Incl / usr / bin / php72, ene- DomainFactory / usr / yendawo / bin / php7-72LATEST-CLI):
Ngoku siqinisekisa ukuba ingxelo yokugqibela ye-PHP isebenza kwikhonsoli. Ukwenza oku, senza ifolda entsha kulawulo lwasekhaya, yenza ikhonkco elithambileyo kwaye ungeze umkhombandlela ekuqaleni kwe-PATH.
Ngoku sifaka umqambi wehlabathi ngokukhuphela, ukujonga kunye nokwenza iskripthi sokufaka, emva koko sibeka umqambi.phar kulawulo lomsebenzisi kunye nokwenza symlink kwakhona:
Sisebenzisa i-nvm ukufaka i-Node. Esi siskripthi se-bash esisetyenziselwa ukutshintshela ngokufanelekileyo phakathi kweenguqulelo zendlela. Sisebenzisa ipropathi apha efakwe kwiNode.js ngaphandle kwamalungelo engcambu:
Ukulungiswa okuncinci kwi .bashrc kwakuyimfuneko kum:
Ngoku sinokufaka kwaye sisebenzise uguqulelo oluzinzileyo lwangoku lweNode:
Ngoncedo lwe-nvm sinokutshintsha ngokulula iinguqulelo.
Ndikwazile ukuwaphumeza onke la manyathelo kunye nabanye abanikezeli bokubamba amaJamani ngaphandle kweengxaki. Eminye imikhosi inengxaki nge-symlinks, kodwa i- aliase nayo inokunceda . Umzekelo, oku kulandelayo .bashrc kuyanceda kwi-DomainFactory:
Kukho iingxaki xa ziinkcukacha / proc / stat kwiindawo virtual / ekwabelwana, apho le nto os.cpus umsebenzi esiludumbo (), umzekelo, imbuyekezo ayicacisiswanga endaweni inani elichanekileyo umphakathi . Xa ufaka iipakeji zango -pm, oku kukhokelela kwimiyalezo yempazamo enje nge "Ayikwazi ukufunda 'ubude bepropathi engachazwanga". Ndakwazi ukucombulula ingxaki ngokusebenzisa ngendlela esandukubakho Node.js (umz 11.15.0) ukuba ziqwalaselwe le ngxaki.